ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့သင့်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ဧရိယာရိတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? နှင့်အကျိုးဆက်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ? အဘယ်? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့သင့်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ဧရိယာရိတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? နှင့်အကျိုးဆက်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ? အဘယ်?
အိုးရိတ်သို့မဟုတ်မခံနိုင်သောလျှင်ရိတ်, ဒါပေမယ့်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအဖြစ်အလှပြင်ဆိုင်ဆံပင်ဖယ်ရှားရေးအထိလက်မှတ်ရေးထိုးရန်ကြပါဘူး။ ငါယောက်ျားတွေငါ4နေ့ရက်ကာလ၌ shaving ပြီးနောက်, ငါသိုးမွှေး panties ထိတ်လန့ထဲမှာလျှင်အဖြစ်သောအချက်တယ်အဖြစ် ELECTROLOGY အမှန်မှာ, အချိန်ကျော်သငျသညျနေ့တိုင်းရိတ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲလုပ်ခဲ့တယ်! epilation တစ်ချိန်ကအပေါင်းတို့နှင့်အသက်အဘို့လုပ်ပါ။ သငျသညျ4-5 ထိုသို့ရိတ်ဖူးဘူးဆိုပါကပဲအမြဲတမ်းဆံပင်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ သင်ရိုးရှင်းစွာတက်ကြွစွာသူတို့ရဲ့ဆံပင်ကြီးထွားဖို့ကိုစတင်သူတို့ဖယ်ရှားပစ်ရန်ခက်ခဲနေကြသည်ခက်ခဲဖြစ်လာကြောင်းရိတ်လျှင်။ ELECTROLOGY နာကျင်။ သို့သော်ရှိသမျှသောဆံပင်၏ဘဝနှင့်ရသောအခါသင်၏မိတ်ဆွေများသင်တို့ရှိသမျှသည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရာခပ်သိမ်းရပါလိမ့်မယ်ထိုဒေသတွင်အနာစိမ်းများနှင့်ဆံပင်နှင့်အတူရှိသောမေ့လျော့။ ဒါဟာတစ်နှစ်3ပြီးတော့အားလုံးတစ်ချိန်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထို့နောက်ထို့နောက် alternate 1 လအတွင်းအချိန်တစ်လထို့နောက်အကြိမ်အပတ်တိုင်း 1 သွားကြဖို့လိုအပ်သောဖွစျလိမျ့မညျ
ရိတ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြတ်ကြီးထွားဇုန်၏ nezaydti ဖို့မအလွန်သတိထားရပါမည်။ လတ်ဆတ်သောသင်တုန်းသုံးစွဲဖို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်
ဒီအထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီ razdrazhenie- ။ ငါမှာအားလုံးကမရှိကြပါဘူး။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးသာဖယောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဇုန်ကွာ 1.sdelat ။
2 ။ ရေချိုးခန်း (1 နှင့်2အမှတ်ပြောင်းလဲမှုသောနေရာများ) တွင်အရေပြားငွေ့
3 ။ ) အရိတ်ဂျယ်သို့မဟုတ်ဂျယ်လ်လျှောက်ထား
4 ။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်
5 ။ တစ်ဦးဂျယ်သို့မဟုတ်တစ်မုန့်-ဂျယ်အသုံးပြုမှု, မုန့် soothing ပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်ခြေ
, ယားနာ irritation, ပြီးတော့ pricked ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအစမပြုမီနွေးရေချိုးယူတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ သင့်အနေဖြင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အဆင်ပြေ shaving ရှေ့၌သင်တို့ဆံပင်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ။ ဒီရင်းနှီးဇုန်အနိုင်နိုင်ပူနွေးသောရေသုတ်ပြီးနောက်။ ဒါဟာပူမဟုတ်သလိုအအေးမဖွစျသညျကိုအရေးကြီးပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့်ဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့ဆံပင်ပေါ်မှာရိတ်ဂျယ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အပေါ်စွန့်ခွာခြင်း, ဆံပင်စိမ်နှင့်ပျော့ပျောင်း။ သာယခုကတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကိုင်တွယ်ပြီးနောက်ရင်းနှီးဧရိယာ shaving ကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့အမြင်များအတွက်မှန်ကိုစုသိမ်း။ တစ်ဦးအဆင်ပြေအနေအထားကိုယူ: တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်စုံတစ်ဦးကအရေးကြီးသည်သင်၏အဆင်ပြေ squatting မှန်ထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့မြင်နေခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့သူတစ်ဦးဦးသည်အတိုင်း, ရေချိုးအနားကွပ်ပေါ်မှာထိုင်, ရေချိုးခန်းအတွက်အဆင်ပြေကြောင့်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအသင်တုန်းရှည်များကိုင်ဆောင်ထား, ညင်သာစွာဆီးခုံမို့မို့ဧရိယာ၌ကြမ်းတမ်းသောအရေပြားပေါ်မှာဆွဲ, အလွန်ဂရုတစိုက်ကိုစတင်ပါ။ ရိတ်ကအနာဂတျမှာအသားအရေယားယံခြင်းနှင့် ingrown ဆံပင်ရှောင်ရှားရန်အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်သာ hairline ပြုရပါမည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက် shaving ပြီးနောက် lotion နှင့်အတူအသားအရေပြုမူဆက်ဆံသည်လိင်အင်္ဂါပေါ်တွင် get ဖို့သတိထားပါဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာဆံပင်လိမ်းဆေးသို့မဟုတ် moisturizer ၏တိုးတက်မှုနှေးကွေးနေတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကုသနိုင်ပါတယ်။
နည်းလမ်း shaving ပြီးနောက်အရေပြားကုသမှုမပြုမီဖြတ်တောက်မှုရှိခဲ့ကြလျှင်, ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်၏ပျက်စီးသွားသောဒေသများနှင့်အတူကိုင်တွယ်။ သာသောနောက်အသားအရေပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုပါ။
Posted in, အလှအပနှင့် Spa မ်ား
63 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,333 စက္ကန့်ကျော် Generate ။